Ny borosy alika tsara indrindra sy ny fomba fampiasana azy | Dogs World
Ny borosy tsara indrindra ho an'ny alika sy ny fomba fampiasana azy
Nat Cherry | 29/11/2021 13:28 | Fitaovana alika
Ny borosy alika dia fototra tsy maintsy ananantsika ao an-trano mba hadio foana ny volony, mamirapiratra ary salama indrindra, na dia fantatsika aza fa indraindray ny fitadiavana ny borosy tonga lafatra na ny borosy dia mety ho fanaintainana kely.
Izany no antony nanomananay ity lahatsoratra feno ity izay tsy hahitanao ny borosy tsara indrindra ho an'ny alika fotsiny amidy amin'ny Amazon, fa koa ny tombony amin'ny fiborosiana ny biby fiompinao, toro-hevitra momba ny fomba hanaovana izany sy ny zatra azy ary ny maro hafa. Ho fanampin'izany, manoro hevitra anao izahay hijery ity lahatsoratra hafa mifandraika amin'ny remover volo.
ACE2ACE Pets borosy ...
Borosy alika, sisiny ...
Alika borosy biby fiompy ...
Docatgo miborosy saka sy...
Borosy Docatgo ho an'ny ...
1 Ny borosy tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Borosy nify azo averina
1.2 Anti-knot comb
1.3 Borosy roa malefaka sy mafy
1.4 Fanala volo ho an'ny alika kely
1.5 Comb amin`ny removable lohany
1.6 Miborosy fonon-tanana misy vokany fanorana
1.7 Borosy malefaka massager
2 Ny tombony amin'ny fiborosiana ny alikanao
3 Impiry ianao no tsy maintsy miborosy azy?
4 Ahoana ny fiborosiana ny alikanao
4.1 Ahoana no zatra amin'ny borosy
4.2 Torohevitra ho an'ny borosy tsara
5 Aiza no hividianana borosy alika
Ny borosy tsara indrindra ho an'ny alika
Borosy nify azo averina
Manenjika alika borosy ary ...
Ny mahazatra eo amin'ny kilasika nefa miaraka amin'ny fikorotanana tena mampahazo aina: ity borosy ity dia misy volom-borona mba hidirana lalina ao anatin'ny volon'ilay biby ary hamela azy toy ny fiaramanidina volamena. Izy io dia manana ny ergonomic wizard ary miasa tena ilaina: ny tines dia azo retractable, ka azonao atao ny manala ny volo rehetra miangona amin'ny borosy amin'ny tsindry bokotra. Farany, ny borosy dia asaina ho an'ny alika manana volo lava na antonony, satria raha fohy izy ireo, dia mety tsy mahazo aina ny volony na miteraka ratra kely. Noho izany antony izany ihany, dia tsy soso-kevitra ny hampiasa izany amin'ny saka fohy volo.
Manenjika tohotra alika ...
Vokatra tsara iray hafa avy amin'ny Amazon, tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy spike, ka mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny karazana alika rehetra. Amin'ity tranga ity, ny fihogo dia ahitana faritra boribory roa ambin'ny folo izay manangona ny volo maty ary manala ny knot. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny borosy dia miaraka amin'ny fihogo, miaraka amin'ny volony tsy maranitra ary misaraka kokoa, mba hahafahanao manala ireo fatotra sarotra indrindra. Na izany aza, ny fanehoan-kevitra dia manasongadina fa raha tsy mitandrina sy miborosy moramora ny volonao ianao, dia mety ho masiaka.
Borosy roa malefaka sy mafy
Ny Furminator dia iray amin'ireo borosy atolotra indrindra hanosehana ny volon'ny biby fiompinao, raha ny marina, azonao ampiasaina amin'ny alika amin'ny karazana volo rehetra ary na saka aza. Ny borosy dia manana endrika roa, ny iray misy barany tariby vita amin'ny baolina mba tsy handratra, izay manangona loto tsara. ary ny volo maty miangona ao amin`ny palitao, ary ny lafiny iray hafa amin`ny malefaka bristles mba hanome mamirapiratra sy hanadio ny volo amin`ny fomba ambony kokoa. Ankoatra izany, dia manana tantana ergonomic tena mahazo aina.
Fanala volo ho an'ny alika kely
Borosy ho an'ny alika saka, ...
Noho ny habeny, ity borosy misy volom-borona ity, na dia vita amin'ny baolina plastika aza mba tsy hanimba ny hoditra, dia mety tsara ho an'ny alika kely sy ny saka. Ny fandidiana dia tena tsotra: mila miborosy fotsiny ianao mba hanesorana ny volo maty. Ny fanalana volo dia misy karazana tweezers ahafahana manadio azy tsara kokoa, ary misy bokotra eo an-damosina hanalana volo maty mora kokoa.
Comb amin`ny removable lohany
Ity fihogo ity koa dia manana ny volony vita amin'ny tariby. Modely tena tsotra izy io, saingy misy endri-javatra tena mahaliana izay mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ireo tia ny fahadiovana sy ny filaminana, loha azo esorina izay ahafahanao manadio azy araka ny tianao. Ny fandidiana dia mitovy amin'ny an'ny borosy hafa. Ny fanehoan-kevitra dia manasongadina ny fahaiza-manaony amin'ny fampiasana azy amin'ny alika fohy sy mafy volo ary miasa tsara mandritra ny fandatsahana.
Miborosy fonon-tanana misy vokany fanorana
Grooming Grooming H HANDSON ...
Ny fonon-tanana misy fiantraikany amin'ny fanorana toy ireo dia safidy hodinihina ho an'ireo izay manana biby fiompy tsy tia borosy, satria hoheveriny fa manafosafo azy ianao. Na dia ratsy fanahy amin'ny faniriana aza izy ireo, dia tsy maintsy ekena fa manatanteraka tsara ny asany izy ireo amin'ny fanesorana ny volo maty amin'ny biby fiompinao ary, ankoatra izany, azonao ampiasaina amin'ny fotoana hafa, toy ny amin'ny fotoana fandroana. Ny nodules dia vita amin'ny fingotra, ka tsy atahorana handratra ny alikanao.
Borosy malefaka massager
Borosy ho an'ny alika sy...
Ary mifarana amin'ny a Fitaovana tena mora ampiasaina ary tonga lafatra ho an'ireo alika izay saro-pady indrindra, satria vita amin'ny fingotra ny spikeny ary tsy manimba. Na dia eo aza ny vidin'ny fanesorana volo kely kokoa noho ny bristles nentim-paharazana, ity massager ity dia mamela ny volon'ny biby fiompinao ho madio tsara, dia tena malefaka sy mahafinaritra kokoa ho azy ireo. Izy io dia miasa indrindra amin'ny alika fohy volo ary misy velcro hampifanaraka azy amin'ny tananao.
Ny tombony amin'ny fiborosiana ny alikanao
Ny fiborosiana alika dia iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ataon'ny olombelona eny na eny, satria tafiditra ao anatin'ny fahasalamana tokony ho tsapany izany. Ankoatra izany, dia manana tombony maro toy ireto manaraka ireto:
Rehefa miborosy volo, esory ny hoditra maty sy ny volo rehetra izay miangona ao amin`ny palitao, izay hahatonga azy ho salama kokoa sy mamirapiratra, ary koa ny sisa tsy misy knots. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny fanesorana ny volo maty dia hampihena ny habetsahanao hita ao an-trano na amin'ny akanjo.
Ankoatra izany, manampy koa ianao manitatra ny menaka voajanahary misy ao anaty palitao ary manentana ny hoditra ianao, zavatra izay manampy amin'ny fitazonana ny alikanao ho salama tsara.
Farany, amin'ny fahafantaranao bebe kokoa ny vatany, dia ho afaka hamantatra haingana ianao raha misy parasy na kôkôla, na raha misy zavatra na mijaly fiovana kely hitondra azy any amin'ny vet.
Impiry ianao no tsy maintsy miborosy azy?
Miankina amin'ny karazana volo ananan'ny alika dia tsy maintsy miborosy azy matetika ianao. Ohatra, mila hosorina indray mandeha isan-kerinandro ny alika manana volo lava be, toy ny Collies. Amin'ny lafiny iray, ny alika fohy volo dia mila miborosy indray mandeha isan'andro, fa ireo manana volo tena fohy dia mila borosy isaky ny mpivady na telo herinandro mba hitazonana ny akanjony sy ny hodiny ho salama.
Na izany na tsy izany, Tena ilaina ny manao borosy haingana isaky ny roa andro mba hitazonana ny akanjon'ny alikanao ho salama sy tsara tarehy.. Ary na dia entinao any amin'ny mpanao volo aza izy ireo, dia tsy hevitra ratsy ny miborosy azy tsindraindray mba tsy hahatonga fatotra.
Ahoana ny fiborosiana ny alikanao
Inona no tena zava-dehibe rehefa miborosy ny alika Tsy ny fomba fiborosiana azy ihany no atao fa ny fanazaran-tena ihany koa mba tsy ho lasa sedra.. Ireto misy famantarana ho azy roa.
Ahoana no zatra amin'ny borosy
Raha toa ianao ka tsy tapaka ao amin'ny MundoPerros, ny torohevitra homenay anao dia azo antoka fa mahazatra, saingy mifototra amin’ny fifampitokisana ny fanabeazana ny biby maro… Ary ny loka. Satria:
Rehefa miborosy ny alikanao dia aza manomboka mivantana. Avelao ny biby fofona ny borosy ary fantaro izany mba tsy hampitahorana azy.
Dia manomboka miborosy azy. Mitenena mora aminy ary valio soa izy raha tony izy. Raha sahiran-tsaina izy dia mialà ary andramo any aoriana, omeo fotoana kely izy hampitony azy.
Ny hafetsena, tena, dia ny manomboka amin'ny kely tena fohy fivoriana borosy ary hamafisina amin'ny loka ary hampitombo tsikelikely izany rehefa zatra ny alika.
Torohevitra ho an'ny borosy tsara
Ankehitriny fantatrao ny fomba hahatonga ny alikanao ho zatra ny borosy, andao hiresaka ny fomba hanaovana borosy tsara, mba hahafinaritra anareo roa ny traikefa.
borosy foana hatrany ambony ka hatrany ambany ary avy ao anatiny ka hatrany ivelany.
Aza miborosy mihitsy amin'ny lalana mifanohitra amin'ny fitomboan'ny volo, halan'ny alika izany.
Be loatra amim-pitandremana mba tsy hisintonana ny volony sy handratra azy.
Raha mahita knots be dia be ianao dia afaka mampiasa a -javatra mampahalefaka maina
Aza hadino omeo sakafo na hanelingelina azy amin'ny kilalao mitsako raha mitebiteby be izy.
Farany, raha hitanao fa tsy azo atao ny miborosy, eritrereto ny hitondra azy any amin'ny mpanao volo ho an'ny alika.
Aiza no hividianana borosy alika
Ny borosy alika dia tena mora hita, na dia tsy manana ny kalitao tadiavintsika foana aza izy ireo. Amin'ireo toerana atolotra indrindra dia hitantsika:
Amazon, tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana hahitanao karazany maro kokoa, izay tonga lafatra raha mitady zavatra tena voafaritra ianao. Manana vato be dia be avy amin'ireo mpampiasa azy izy, izay ahafahanao mahita izay tadiavinao, na dia ao anatin'ireo vokatra maro samihafa aza dia mety ho mandreraka indraindray. Farany, miaraka amin'ny safidiny Prime izy ireo dia mitondra izany any aminao ao anatin'ny fotoana fohy.
ny fivarotana manam-pahaizana manokana Ho an'ny biby toa an'i Kiwoko na TiendaAnimal dia tsara izy ireo raha mila hevitra matihanina kokoa ianao. Ankoatr'izay, ny fananana fivarotana ara-batana dia azonao atao ny manamarina ny vokatra eo ary jereo raha mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao.
Farany, misy toerana maro hafa, toy ny sehatra lehibe toy ny Carrefour na El Corte Inglés, izay ahitanao fizarana ho an'ny biby misy borosy modely vitsivitsy izay afaka manala anao amin'ny olana amin'ny fotoana rehetra.
Manantena izahay fa nanampy anao hahita ny borosy alika mifanaraka amin'ny filanao sy ny an'ny alikanao. Lazao anay, karazana borosy inona no ampiasainao? Te-hizara teknika aminay ve ianao? Tian'ny alikanao ve ny miborosy sa tsy maintsy avelanao eo am-pelatanan'ny mpamboly?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny borosy tsara indrindra ho an'ny alika sy ny fomba fampiasana azy
Ny seza misy kodiarana tsara indrindra ho an'ny alika hanatsarana ny fivezivezeny
Ny diaper alika tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra